(11 okushiwo abanye)
Mykanino, Moskovskaya oblast', i-Russia
Indawo yonke ibungazwe ngu-Андрей
Yonke indawo kuzoba eyakho wedwa.
I-Islet encane yase-Italy esifundeni saseMoscow, imvelo enhle kakhulu itholakala egqumeni, ngaphansi kwezimvu zezinhlobo eziphakeme zidla, umfula, amasimu angapheli kanye nehlathi elikude, i-moose iphuma emasimini.
Eduze kweNew Jerusalem Monastery, eduze neSirota cheese dairy.
Ekutholakaleni kwe-Istra reservoir.
indlu encane yababili enakho konke ukunethezeka (intengo inikezwa ukudla kwasekuseni) enombono omuhle ngendlela emangalisayo kusukela efasiteleni le-panoramic ensimini, umfula kanye nehlathi elingezansi, izimvu zidla emasimini, ama-elk aphuma.
(ikhishi liseduze nendlu)
ensimini kune-bathhouse ene-pool encane, i-bath attendant kanye ne-masseur. (inkokhelo eyengeziwe)
Bonisa wonke amasevisi angu- 75
5.0(11 okushiwo abanye)
5.0 · 11 okushiwo abanye
Le ndawo ifana nesiqephu esincane sase-Italy ezindaweni ezingaphansi komhlaba ... kusukela efasiteleni le-panoramic endlini kukhona umbono omuhle ngendlela emangalisayo, umoya ohlanzekile, umfula wehlathi.
eduze kwesigodlo sezindela saseJerusalema esisha.
bude buduze nedamu lase-Istra.
Ujoyine ngo-Meyi 2021
ukuxhumana komuntu siqu, ifoni, i-WhatsApp, ucingo.
UАндрей Ungumbungazi ovelele